सेयरको अचाक्ली माग, नेशनल माइक्रो फाइनान्सको आइपीओमा पहिलो दिन नै ३५ गुणा बढी आवेदन ! Bizshala -
सेयरको अचाक्ली माग, नेशनल माइक्रो फाइनान्सको आइपीओमा पहिलो दिन नै ३५ गुणा बढी आवेदन !
काठमाण्डौ । नेशनल माइक्रो फाइनान्स बित्तीय संस्था लिमीटेडले साउन १६ अर्थात आइतबारदेखि मागेको आइपीओको आवेदनमा पहिलो दिन नै ३५ गुणा बढी आवेदन परेको छ ।
यो संस्थाले ३ करोड मूल्यको ३ लाख कित्ता प्राथमिक सेयरको निश्कासन गरेको हो । यसका लागि आवेदन दिने मिति आइतबारदेखि थियो ।
एकसय रुपैयाँ अंकित मूल्यको आइपीओका लागि पहिलो दिन नै ३५.१६ गुणा बढी आवेदन परेको आइपीओको निश्कासन तथा व्यवस्थापनका लागि बिक्री प्रबन्धक तोकिएको एनआइबिएल क्यापिटल मार्केट्स लिमीटेडले जनाएको छ ।
एनआइबिएल क्यापिटलका मर्चेन्ट बैकिङ प्रमुख बद्री प्याकुरेलका अनुसार एकैदिन ९६ करोड बढीको आइपीओ आवेदन परेको हो । एकैदिन विभिन्न स्थानबाट १४ हजार बढी आवेदन परेका छन् ।
आइपीओको यो अफर आगामी साउन १९ गते बन्द हुनेछ । त्यसपछि पनि आवश्यक परेको खण्डमा आवेदन दिने अधिकतम अन्तिम मिति साउन ३० हुन सक्नेछ ।
इच्छुक आवेदकले न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ ।
यो माइक्रो फाइनान्स कम्पनीले आइपीओको निश्कासनबाट चुक्तापूँजीमा ३ करोड थप गर्ने योजना बनाएको छ । आइपीओको व्यवस्थापनपछि कम्पनीको कुल चुक्तापूँजी १० करोड रुपैयाँ पुग्ने बताइएको छ । अधिकृत पूँजी ५० करोड रुपैयाँको रहेको छ ।
आइपीओपछि यो कम्पनीमा संस्थापक–सर्वसाधारणको सेयर रेसियो ७० : ३० हुनेछ ।
National Microfinance Bittiya Sanstha Limited initial public offering(IPO)